အရှုံးပေါ်လေတဲ့ မမရဲ့ဘတ်ဂျက်စာရင်းနဲ့ ကလေးအတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အရှုံးပေါ်လေတဲ့ မမရဲ့ဘတ်ဂျက်စာရင်းနဲ့ ကလေးအတွေး
ရွာစားကျော် သားတော်မောင်ရဲ့ကလေးအတွေး အရှုံးပေါ်တဲ့ မမ ဘတ်ဂျက်
သြော်.. ကလေးအတွေး ပြောပါတယ်။
လေခ အတော်ကုန်တယ်လို့ ဖြီးတာပေါ့ဗျာ..
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ အမေ့ စာမူ တစ်ခုကို ပြန်လည် သတိရစေ တဲ့ … စာတခုဖြစ်ကြောင်း
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် စီးနေရတာတောင် .. ဒီလောက် ကဲ နေကြတာ ကိုယ့်ဆြာ ရေ … တရားဝင်သာ စီးခွင့်ပေးလိုက်ရင် .. ဆေးရုံကြီး မှာ ပွဲဈေးတန်း ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဟို မေးကွဲလေးဆိုလား သူ့ဆီကျ တရက် ဘယ်နှစ်ခါ ဆက်သလဲ ပြောစမ်း ပြောစမ်း
သိန်း ၂၀ တန် ဂျစ်ကားကတော့ .. ဖြုတ်လဲ… ကြီး နေမှာပါဗျာ …။ ဖျက်သိမ်းတော့ မ၀င်သေးဘူးဗျို့  .. ဇုန်ထုတ်က သက်တမ်း နှစ် ၂ ဆယ် မှ မရှိသေးတာ။ ဈေးကွက် သဘောအရ .. ၀ယ်သူ မရှိတော့လဲ ဈေးကျ တာကိုးဗျ … ကို ရွာစားကျော် သား .. ကတော့ စကားလွှတ်တတ် တာကိုးဗျ ….။
မမ က အရှုံးပေါ်တယ်ဆိုရင်
သင့်လျော်တဲ့ စည်းကမ်းတွေထားရုံမက စားသုံးသူ အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေလိုဟာမျိုးတွေလည်း လိုအုံးမယ်ထင်တယ် ဦးပါရေ
အယ် ….. ပြည်သူတွေ လက်မှတ်သွားဝယ်ပြီဆိုလျှင် … မနက် ငါးနာရီလောက် သွားတိုးလျှင်တိုး မတိုးလျှင် ကုန်ပြီဆိုပြောနေတဲ့ … ရထားလက်မှတ်ကို .. ၀န်ထမ်းတွေကို .. တ၀က်ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးလို့ ဘတ်ချက်အရှုံးပေါ်သတဲ့လား … အဟိ …. ကိုရွာစားကျော်တို့ … တူးဆွချက်ကတော့ … ကွက်တိပါပဲ ….. ။
ဟုတ်လျှင်လည်း ဟုတ်မှာပါ ၀န်ထမ်းတွေကို တ၀က်ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးနေရတယ်ဆိုတာ …အဲ့ဒီရောင်းပေးနေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေထဲ …. မီးရထားက ၀န်ထမ်းတွေ 99%များပါနေမလားဟင် …. သိချင်လွန်းလို့ဘာ …….. ခွိခွိ
မမရဲ့ ဘတ်ဂျက် ဆိုလို့ ရွာထဲ က မမ လားလို့ လာကြည့်တာ ပြိးတော့ မြန်မာ့ မီးရထားကိုပြောတာကိုး….။ အရှုံးပေါ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပုဂ္ဂလိက ကိုလွှဲကြည့်ပါလား …။ ချက်ချင်း အမြတ်စာရင်းတက်လာမယ်…။ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက်လေ…။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်
မမ မှမဟုတ်ပါဘူး အစိုးရဌာနတိုင်းမှာ အရှုံးပေါ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ ၀န်ကြီးတိုင်းကတော့ ချမ်းသာနေတာနော်။ (န၀တ ၀န်ကြီးများကို ပြောတာပါ)
မမ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်ခဲ့ရတာရှိပါသေးတယ်
အရီး လဲ မမ ဆိုလို့ တို့ မမ ဘာတွေရှုံးကုန်ပြီလဲလို့။
နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လွှတ်တော်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး ကိုစိတ်ဝင်တစား ဦးစားပေးဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမှာပဲ။
ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ငန်းကအမြတ်ရရှိသူတွေကို အမြတ်ကြီးစားတွေ အရင်းရှင်တွေလို့ ယူဆကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းတိုင်းကိုနိုင်ငံရေးအမြင်ကကြည့်ပြီး အရှုံးခံလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအရှုံးခံခဲ့တဲ့အတွက် ဆင်းရဲတွင်းဟာနက်သထက်နက်လာပါတယ်။ အရှုံးခံခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကို လုံလောက်တဲ့လုပ်ခလစာမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာရရှိထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေအသုံးပြုပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ အနိုင်ကျင့်မှုများ ဘက်လိုက်မှုများ ကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်မှု ဘက်လိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး တဖြေးဖြေးစုလာသော မကြေနပ်မှု မှ ဆယ်စုနှစ်တခုခန့်ကြာသောအခါ ပေါက်ကွဲမှုကြီးတခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထိုပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် နောင်မလုပ်ရဲအောင် ရက်စက်သောနည်းလမ်းများဖြင့် နှိမ်နှင်းခဲ့သောလည်း မှန်ကန်သောရေသောက်မြစ်ကို ဖြေရှင်းခြင်းမဟုတ်သဖြင့် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အမြတ်ပြနေနိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေလဲ တကယ်တော့ ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် …
ရွာထဲက ကျနော်တို့ မမ ကိုလည်း ဆောရီးနော်
ပြည်သူတွေ အမှန်တကယ် အကျိုးခံစားရရဲ့လား ဆိုတော့ :'(